Teboky ny tantara :: Hifantoka amin-dRainilaiarivony ny fisantarana ny taona etsy Anjohy • AoRaha
Teboky ny tantara Hifantoka amin-dRainilaiarivony ny fisantarana ny taona etsy Anjohy
Efa mitsipalotra etsy sy eroa ireo hetsika ho an’ny kolontsaina sy ny tantara. Hisantatra ny taona sahady ny « Café Histoire » Anjohy ka ny praiminisitra Rainilaiarivony no hanombohany izany, amin’ny 11 janoary 2020 ho avy izao.
Toy ny mahazatra, manam-pahaizana manokana amin’ny tantara, Annick de Comarmond, no hizara ny fahalalany momba ity olobe nanamarika an’i Madagasikara ity.
Raha ny fanazavana, Ranilaiarivony, nantsoina hoe Radilifera dia taranaka farany tamin’ireo voahosotra ho Praiminisitra.
Tamin’ny taona 1864 no nandray ny toerany izy. Naharitra telopolo taona no naindraiketany an’izany hatramin’ny taona 1895. Nampiany ny andraikitry ny kaomandy lehiben’ny tafika ny maha praiminisitra azy, nony taty aoriana.
Mba hitazonana ny toeram-boninahitra misy azy dia nanambady ireo mpanjakavavy telo nifanesy farany teto Madagasikara izy. Nahatsapa ny fitsiriritan’ ny Frantsay sy ny Anglisy an’i Madagasikara izy ka niezaka ny nametraka ny maha izy azy an’i Madagasikara manoloana izao tontolo izao. Nilavo lefona teo anoloan’ireo Frantsay anefa izy ny taona 1895. Natao sesitany tany Angletera izy ny taona 1896 ary nodimandry tany tamin’io taona io ihany.
Ny tantaram-piainan’ity praiminisitra malagasy nanamarika ny tantaran’ny firenena ity sy izay fahaizany niaro an’i Madagasikara no hatolotra mandritra ny fotoana eny Anjohy. Ireo mpandranto fianarana amin’ny sokajy rehetra sy ireo mpanao fikarohana no tena hiantefan’ny fanasana.
Fanairana aigam-panahy Hampirisika ny famoronan’ ny mpanakanto ny “meinOrt”
Tontolon’ny haisary :: Mbola haharitra herintaona ny fampirantiana « Tendrombohitra faha-13 »
Fampirantiana saripika etsy Analakely :: Mitohy ny fanasongadinan’i Pierrot Men ny filàna rano any Atsimo